ရသစုံပဟေဠိ(အတွဲ-၂) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ရသစုံပဟေဠိ(အတွဲ-၂)	18
Posted by •*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ on Mar 18, 2015 in Creative Writing, Entertainment, Movies/TV | 18 comments
ရုပ်ရှင်ဇာတ်ဝင်ခန်း ရုပ်ပုံကားချပ်လေးတွေကိုကြည့်ပြီး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနာမည်လေးတွေ ဖြေပေးရမှာပါ။
ကမ္ဘာမှာ နာမည်ကြီးတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတွေကိုပဲ ထုတ်နှုတ်မေးထားတာမို့လွယ်ပါတယ်။
ဖြေပေးကြည့်နော်။ A-မင်းသားကြီး Harrison Ford့ရဲ့ နာမည်ကြီးရုပ်ရှင်
B-ဒါရိုက်တာRoland Emmerich ရဲ့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုအကြောင်းပုံဖော်ထားတဲ့ ကမ္ဘာကျော်ရုပ်ရှင်
C-မင်းသမီးချော Scarlett Johansson ရဲ့နာမည်ကြီးရုပ်ရှင်
D-2005 ခုနှစ်က စိတ္တဇရုပ်ရှင်ပါ။မျက်နှာဖယောင်းသွင်းချင်သူများသတိထားရမယ့်ကားပါ E-နာမည်ကြီး ချစ်ဇာတ်လမ်း ရုပ်ရှင်တစ်ကားပါ။ကားဟောင်းဆိုပေမယ့် Romance ကြိုက်သူများ မမေ့နိုင်တဲ့ကားပါ။
F-နာမည်ကြီး အဆိုတော်၊ကမ္ဘာကျော်သရုပ်ဆောင်ပေါင်းများစွာပါဝင်တဲ့ အချစ်ဖန်စီ။
G- မင်းသားကြီး Roger Moore ရဲ့ ကမ္ဘာကျော်ရုပ်ရှင်ကြီး။
H-အမျိုးသမီးတွေရဲ့အသဲစွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာကျော်မင်းသားချောကြီး Tom Cruise ရဲ့ အချစ်နဲ့အိမ်ထောင်ရေးနာမည်ကျော်ဇာတ်လမ်း။
အဆင်ပြေရင် အတွဲ-၃ ဆက်ပါဦးမည်။
naywoon ni says: G အဲ့ ဂျိန်းစ်​ဘွန်းဇာတ်​ကား နာ ကျိဖူးလယ်​ ။ အဲ့ပုံက ​နောက်​ဆုံးဇာတ်​သိမ်းခန်းမို့လား ။ အဲ့ဇာတ်​ကားနာမယ်​ စဉ်းစားလို့မရဘူး ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: The Spy Who Loved Me :-))))))))))))))))
မြစပဲရိုး says: A. Six Days Seven Nights
E. The Notebook (အခါခါ ကြည့်ဘူး တဲ့ကား)
ကျန်တာ တွေ ပြန်လာမယ်။ :-)))))))
Alinsett@Maung Thura says: B. The Day After Tomorrow တစ်ခုပဲ သေချာသိတယ်
ကျန်တာတွေက ကျိဖူးပေမဲ့ အမည်မမှတ်မိတော့တာတွေပါနေလို့
B ကတော့ ကြည့်ရင်းနဲ့ အေးလာလို့ အနွေးထည်တောင် ထဝတ်ချင်လောက်အောင် ကျနော့်ကို ဆွဲဆောင်ခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားပေါ့။
Mr. MarGa says: A. Six Days Seven Nights 1998 film
B. The Day After Tomorrow 2004 film
C. The Island 2005 film
D. House of Wax 2005 film
E. The Notebook 2004 film
F. Valentine’s Day 2010 film
G. The Spy Who Loved Me 1977 film
H. Jerry Maguire 1996 film
မွသဲ ( 17082011 ) says: ဟမလေးဒဂျား စပွန်ဇာဖြေ အဲ့ စကော်လာဖြေနေဒါလားငင် ဒေါက်တိုဘွဲ့။ တော်လိုက်ချက်
Mr. MarGa says: ဟီဟိ
black chaw says: သကြားဖြေတာ ငါ့ထက်ဦးသွားတယ်…။
ဦးကြောင်ကြီး says: စစ်တပ်လိုပဲ ဘယ်သူမှ မတောင်းဘဲနဲ့ တခန်းပီးတခန်း ဆက်နေ.. ဒါလားကွ ကွင်သဗုံ… အလဂါး အတုဂျီး
Ma Ei says: G- မင်းသားကြီး Roger Moore ရဲ့ ကမ္ဘာကျော်ရုပ်ရှင်ကြီး။
တောင်ပေါ်သား says: A =6days7nights
B = The day after tomorrow
the others ; I don’t know Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4010
manawphyulay says: ပြောတော့ပါဘူး။ ကြည့်ပြီးတာလည်း ပါတယ်။ မကြည့်ရသေးတာလည်းပါတယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3713
လုံမလေးမွန်မွန် says: တစ်ကားမှ မသိဘူးရယ်.. ဟိ…
မင်း ခန့် ကျော် says: ကုလားကားပါမယ်မှတ်နေတာ။
ပါလဲပါဘူး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4718
padonmar says: ကိုယ့်အခြေအနေကိုယ်သိပြီ။
ဒါပေမယ့် ရှေ့မှာ ကိုယ့်လိုလူ မွန်မွန်ရှိလို့တော်သေး။
ဗုံဗုံ says: A မြိုင်ရာဇာတွတ်ပီနှင့်တပည့်ကျော်ဗိုက်ကလေး
B စိန်မျောက်မျောက်နဲ့ စိန်ပေါက်ပေါက်
E ဘိုဘို Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2805
Wow says: Valentine’s Day တစ်ခုပဲသိဒယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.